November | 2012 | Rev.U Min Lwin
Posted by ဦးမင်းလွင် on 17/11/2012
Posted in: တရားေဟာခ်က္.	Tagged: ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း.	2 Comments
ယနေ့ လူသားတိုင်းသည် မျှော်လင့်ချက် အမျိုးမျိုး ရှိနေကြ ပါသည်။ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ မိသားစုအရေး စသည် ဖြင့် ပွင့်လင်းလာသော လက်ရှိအခြေအနေကို အမှီပြု၍ မျှော်လင့်သော အရာ အမျိုးမျိုး ရှိနေကြပါသည်။ သို့သော် ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့၏ မျှော်လင့်ခြင်းသည် လောကသားတို့၏ မျှော်လင့်ခြင်းများနှင့် များစွာကွာခြားနေပါသည်။ ယနေ့ ယုံကြည်သူတို့၏ မျှော်လင့်ခြင်းသည်ကား ဘုရားသခင်၌သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထိုအကြောင်းအရာနှင့် ပတ်သတ်၍ သမ္မာ ကျမ်းစာမှ ဖတ်ကြားလိုသည့် အချက်တစ်ခုမှာ ဇာခရိ ၉း၁၂ ဖြစ်ပါသည်။
အချုပ်ခံ၍ မျှော်လင့်သောသူတို့ ရဲတိုက်သို့ ပြန်လာကြလော့။ ငါသည် နှစ်ဆသော ကျေးဇူးကို ပြုဦးမည်ဟု ယနေ့ ပင် ပြောထား၏။ (ဇာခရိ ၉း၁၂)
ထိုကျမ်းပိုဒ်တွင် အချုပ်ခံ၍ မျှော်လင့်သောသူ ဟူသောသူတို့ကို ရည်ညွှန်းထားပါသည်။ ဘုရားသခင်၌ ရှိနေသော သူတို့သည် နောက်ဆုံးအခြေအနေထိ တိုင်အောင် မျှော်လင့်စရာ ရှိနေကြပါသည်။ အခြေအနေက မည်မျှပင် ဆိုးရွား နေစေကာမူ ဘုရားသခင်က လက်ရှိအနေအထားကို ပြောင်းလဲပစ်နိုင် ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မည်သည့် အခြေအနေတွင်မဆို ဘုရားသခင်၌ မျှော်လင့်စရာကတော့ ရှိနေပါသည်။ ထို့ကြောင့် ထိုမျှော်လင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ် ပြီး အချက် သုံးချက် တင်ပြလိုပါသည်။
(၁) အသက်ရှင်သော မျှော်လင့်ခြင်း
ကျွန်တော်တို့၏ အသက်ရှင်ခြင်းသည် မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သတ် ဆက်နွယ်နေပါသည်။ ယနေ့ ခေတ် ကာလ တွင် ကိုးရီးယားနိုင်ငံသည် မိမိကိုယ် မိမိ အဆုံးစီရင်မှုနှုံး အမြင့်ဆုံးဟု သိရပါသည်။ အခြေအနေက ငွေကြေး ချမ်းသာ ကြွယ်ဝနေသူ၊ ပညာတတ်သူ၊ ရာထူးရှိသူ . . . အစရှိသဖြင့် ဖြစ်နေသော်လည်း မျှော်လင့်ချက် ကုန်ဆုံး သွားပြီဆိုပါက လူ့လောကတွင် ဆက်လက် အသက်ရှင်နေထိုင်လိုစိတ် ကုန်ဆုံးသွားတတ်ကြပါသည်။ သို့သော် မျှော်လင့်ချက်များ ရှိနေပါက အခြေအနေ မည်မျှပင် ခက်ခဲနေစေကာမူ အသက်ရှင်ရသည်မှာ အားနှင့် ပြည့်စုံနေ တတ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် မျှော်လင့်ခြင်း ရှိနေဘို့ အလွန်အရေးကြီးပါသည်။ မျှော်လင့်ခြင်း မရှိတော့လျှင် ထိုသူ၏ နောက်မှ ဝမ်းနည်းခြင်းများ လိုက်ပါလာတတ်ပြီး အဆုံးသို့ ရောက်ရှိသွား တတ်ပါသည်။
၁ သက် ၄း၁၃ တွင် ဖော်ပြထားသည်မှာ
ညီအကိုတို့ မျှော်လင့်ခြင်းမရှိသော အခြားသူတို့သည် ဝမ်းနည်းသကဲ့သို့ သင်တို့သည် ဝမ်းမနည်းမည်အကြောင်း အိပ်ပျော်သောသူတို့၏ အမှုအရာကို မသိဘဲ နေစေခြင်းငှါ ငါအလိုမရှိ။ (၁ သက် ၄း၁၃)
ထိုကျမ်းပိုဒ်တွင် မျှော်လင့်ခြင်းနှင့် ဝမ်းနည်းခြင်းကို ပေါင်းစပ် မှီတွယ်နေသည့် အသွင်ဖြင့် ရေးသားထားသည်ကို တွေ့ရှိရပေမည်။ ထို့ကြောင့် လူတို့သည် မျှော်လင့်ခြင်း မရှိလျှင် ဝမ်းနည်းမည်ဖြစ်ပြီး၊ မျှော်လင့်ခြင်း ရှိနေလျှင်တော့ ဝမ်းမြောက်ခြင်း ခံစားရမည်သာ ဖြစ်ပါသည်။ ထို့ကြောင့် သင်သည် မည်မျှ ခက်ခဲ အဆင်မပြေမှုများ ကြုံတွေ့ရ သည် ဖြစ်စေ လုံးဝ အရေးမကြီးပါ။ သင့်ထံတွင် မျှော်လင့်ခြင်း ရှိဘို့သာ အရေးကြီးပါသည်။ ထိုမျှော်လင့်ခြင်း ဘုရား သခင်၌သာ ဖြစ်ပြီး၊ ထိုကဲ့သို့သော မျှော်လင့်ခြင်းကို အသက်ရှင်သော မျှော်လင့်ခြင်းဟု ခေါ်ဆိုနိုင်ပါသည်။
အထက်တွင် အခြေပြုဖေါ်ပြခဲ့သော ဇာခရိ ကျမ်းပိုဒ်တွင် မျှော်လင့်ချက် မဲ့နေသူများအတွက် ဖေါ်ပြထားသည်မှာ “ငါသည် နှစ်ဆသော ကျေးဇူးကို ပြုဦးမည်” ဟုဖေါ်ပြထားပါသည်။ ဆိုလိုသည်မှာ သင့်ထံတွင် ရှိသော ပြဿနာကို အဆင်ပြေရုံမျှသာ ဘုရားသခင်က ကူညီ မစမည် ဆိုသည်ထက် ကောင်းကြီး မင်္ဂလာနှင့် ထပ်မံရစ်ပတ်ဦးမည်ဟု ဆိုနေသယောင် ခံစားမိပါသည်။
ကျွန်တော်တို့သည် တစ်ချိန်က ကြုံတွေ့ခံစားခဲ့သော ပြဿနာများကို ပြန်လည်ခံစားတမ်းတနေသောသူများ မရှိပါ။ သို့သော် ထိုပြဿနာ ခံစားရပြီး နောက်ပိုင်းတွင် ကြုံတွေ့ရသော ကောင်းကြီးမင်္ဂလာများကို ပြန်လည်ခံစား ကျေးဇူးတော် ချီးမွမ်းတတ် သောသူ အများအပြား ရှိကြသည် မဟုတ်ပါလား။ ဘုရားသခင်သည် သင့်ခံစားရသော ပြဿနာကို ခံစားဝမ်းနည်းနေရသည်ထက် သင့်ကို ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပေးလိုသော အကြံအစည်တော်က ပိုမို ကြီးမား ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့သော မျှော်လင့်ခြင်းကို အသက်ရှင်သော မျှော်လင့်ခြင်းဟု သတ်မှတ်နိုင်ပါသည်။ လောက သားများ၏ မျှော်လင့်ခြင်းမူကား ဘုရားသခင်၏ အစွမ်းတန်ခိုးများ အပေါ်တွင် အခြေပြုထားခြင်း မဟုတ်ပေ။ ထိုသူတို့၏ မျှော်လင့်ခြင်းမူကား သေနေသောသူတို့၏ မျှော်လင့်ခြင်းသာ ဖြစ်ပေတော့သည်။
(၂) မသေနိုင်သော မျှော်လင့်ခြင်း
ပိုမို၍ အဆင့်မြင့်သော မျှော်လင့်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် အသက်ရှိသော သတ္တဝါတိုင်းသည် သေခြင်း တရားကို မလွဲမသွေ ခံစားရကြပါသည်။ ယုံကြည်သူတို့ အတွက် ပြဿနာ အခက်အခဲများ ကြုံတွေ့ရ တိုင်း ပင်ပန်းနွမ်းနယ်မှုကို ခံစားရကြသည်။ သို့သော် ဘုရားသခင်က ပြန်လည် လန်းဆန်းလာစေရန် အမြဲတမ်း လုပ်ဆောင်ပေးတတ်သည်။
သတ္တဝါတိုင်းသည် အသက်ကြီး လာသည်နှင့်အမျှ အားလျှော့လာပြီး၊ နောက်ဆုံးတွင် ဘုန်းဘုန်းလဲ သွားတတ် သည်။ သို့သော် ရွှေလင်းယုန် ဟူသော ငှက်သတ္တဝါသည် မည်မျှပင် အားလျှော့၊ ပင်ပန်းနေစေကာမူ နေကိုကြည့် ခြင်းဖြင့် သူတို့၏ အင်အားများကို ပြန်လည်ရရှိကာ လမ်းဆန်းစေပါသည်။ ယုံကြည်သူတို့၏ အသက်တာသည် မည်မျှပင် ခက်ခဲအားကုန်ခန်းကာ ဝမ်းနည်းခြင်း ခံစားနေရပါစေ၊ ဘုရားသခင်က သင့်ကို ပြန်လည် သိမ်းဆည်းခြင်း ဖြင့် သင့်အသက်တာကို အသစ်သော လန်းဆန်းမှုကို ပြုလုပ်ပေးနေပါသည်။ သင့်ကို ဘုရားသခင်က ရွှေလင်းယုန် ကဲ့သို့ ဖန်ဆင်းထားသည်။ ဘုရားသခင်ကို ကြည့်ပြီး အသက်ရှင်သောအခါတိုင်း သင့်ထံမှ လျှော့ပါးသွားသော ခွန်အား များကို ပြန်လည် ပြည့်ဝစေမည် ဖြစ်ပါသည်။ တစ်ခါ တစ်ရံ မိမိတို့ မျှော်လင့်ခဲ့သော အရာများသည် ဘာမျှ ဖြစ်မလာသောကြောင့် ထိုမျှော်လင့်ခဲ့သောအရာများကို မေ့လျှော့ သွားသည့် အချိန်များ ရှိတတ်ကြပါသည်။ “ငါမျှော်လင့် ခဲ့သည့်အရာမှာ ဘာမှ မဟုတ်ပါလား” ဟု တွေးထင်ခဲ့သည့်အရာများ ရှိတတ်ကြပါသည်။ သမ္မာ ကျမ်းစာတွင် ထိုကဲ့သို့ ခံစားချက်မျိုးကို ယာကုတ်ထံတွင် တွေ့ရှိရပါသည်။ ကျွန်တော်တို့၏ မျှော်လင့်ခြင်း အခြား တစ်ဘက်တွင် အချိန်မည်မျှ ကြာနေပါစေ ဘုရားသခင်သည် အလုပ်လုပ်လျက် ရှိနေသည်ဆိုခြင်းကို သင်နားလည် စေချင်ပါသည်။
ကျမ်းစာထဲတွင် “ယာကုတ်” ဟူသောအမည်မှာ “လှည့်စားသူ” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရှိသော်လည်း ထိုအခြေအနေမျိုးတွင် ဘုရားသခင်က တစ်သက်လုံး မထားခဲ့ပါ။ “ဘုရားသခင်၏ မင်းသားလေး” ဟု အဓိပ္ပါယ်ရသော “ဣသရေလ” ဟူသော နာမည်ဖြင့် သူ၏ အသက်တာကို အဆုံးသတ်စေခဲ့ပါသည်။ ယာကုတ်သည် မိမိအလွန်ချစ်သော သား ယောသပ်နှင့် ကွဲကွာသွားခဲ့သည်မှာ နည်းသောနှစ် မဟုတ်ချေ။ ယောသပ် အိမ်မက်စတင်မက်ခဲ့ချိန်မှ စတင်ကာ ရောင်းစားခံ၊ ကျွန်ခံ၊ ထောင်ကျ၊ ပြန်လွတ်၊ အိမ်ထောင်ကျ၊ နန်းတော်သို့ရောက် . . . စသည့် အချိန်ကာလသည် အနှစ် (၂၀)ခန့် ရှိသည်ဟု သိရပါသည်။ ယာကုတ် အတွက် သားနှင့် ကွဲကွာသွားခဲ့သည်မှာ ငါးနှစ်၊ ဆယ်နှစ်သာမက အနှစ် နှစ်ဆယ်ခန့် ကြာခဲ့ပြီ ဖြစ်သဖြင့် မျှော်လင့်ချက် သေဆုံး နေပြီဟု ဆိုနိုင်ပါသည်။ သို့သော် ယာကုတ်၏ မျှော်လင့်ခြင်း အခြားတစ်ဘက်တွင် ဘုရားသခင်သည် ကြီးမားသော လက်တော်ဖြင့် အလုပ်ကြီး လုပ်နေခဲ့သည် မဟုတ်ပါလား။
ယောသပ်နှင့် ပြန်လည်တွေ့ဆုံသည့်အချိန်တွင် ယာကုတ်ခံစားခဲ့ရသော ဆင်းရဲခြင်းနှင့် ဝမ်းနည်းခြင်း ကြေကွဲခြင်း တို့သည် ဝမ်းမြောက်ခြင်းသို့ ကူးပြောင်းကာ ကောင်းကြီး မင်္ဂလာများအဖြစ် အသွင်ပြောင်းပြီး ယာကုတ် ခံစားခဲ့ရ ပါသည်။ ထိုကဲ့သို့ပင် သင့်အသက်တာတွင် ခံစား ဝမ်းနည်းနေခဲ့ရသော အချိန်ကာလများ အတွက် ကြေကွဲ ဝမ်းနည်းမှု မဖြစ်စေချင်ပါ။ ဘုရားသခင်သည် အချိန်ကာလ မည်မျှပင် ကြာနေစေကာမူ သင့်၏ မျှော်လင့်ခြင်း အကျိုး ရလဒ်ကို ဖြည့်ဆည်း ပေးရန် ပြင်ဆင် လုပ်ဆောင်နေပါသည်။ သင်ထားရှိသောမျှော်လင့်ခြင်းသည် အချိန် ကာလ များစွာကြာခဲ့သဖြင့် သေဆုံးသွားပြီဟု မခံစားသင့်ပါ။
(၃) ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း တန်ခိုးနှင့် ပြည့်သော မျှော်လင့်ခြင်း
သမ္မာ ကျမ်းစာထဲတွင် သခင်ယေရှု ခရစ်တော် ပြန်လည် ရှင်ပြန် ထမြောက်စေခဲ့သော လူပုဂ္ဂိုလ် (၃) ဦးရှိပါသည်။ ပထမ တစ်ဦးမှာ အသက်ငယ်ရွယ်သေး သော ယာဣရု၏ သမီးဖြစ်ပါသည်။ လူတို့သည် ထိုသမီး သေဆုံးသွား သောကြောင့် ဝမ်းနည်း ကြေကွဲနေပါသည်။ အဘယ်ကြောင့် ဆိုသော် မျှော်လင့်ချက် ကုန်ဆုံးသွားသောကြောင့် ဖြစ်ပါသည်။ မိန်ခလေး၏ မိဘများ ကိုယ်တိုင် ဝမ်းနည်းကြသည်။ လူသားတိုင်းအတွက် ထိုအခြေအနေသည် မည်သည့် ပညာ၊ အစွမ်း၊ တန်ခိုး၊ ရာထူးများ ကိုင်ဆောင်ထားနေစေကာမူ ထိုအခြေအနေသည် နောက်ဆုံး ဖြစ်သည်။ မည်သို့မျှ ပြန်လည် အသက်ရှင်လာဘို့၊ မျှော်လင့်ချက် များ ဆောင်ယူလာဘို့ မည်သို့မျှ မဖြစ်နိုင်ချေ။ ဘုရားသခင် သည်သာလျှင် မျှော်လင့်ခြင်း ဖြစ်ချေတော့သည်။ လူတို့ကို ဘယ်သောအခါမျှ ဘုရားသခင် သည် ဝမ်းနည်းခြင်းထဲတွင် ဖုံးအုပ်မထားချေ။ သခင်ယေရှုသည် အရာရာတိုင်း အတွက် မျှော်လင့်ခြင်း ဖြစ်သည် ဆိုသည် ကို သူတို့ နားမလည် ခဲ့ကြချေ။ သို့သော် သခင် ယေရှုသည် ထိုနေရာသို့ ရောက်ရှိ သွားသောအခါ ထိုမိန်ခလေးမှာ ပြန်လည် အသက်ရှင် လာပါသည်။ ထိုအခါမှ သူမ၏ မိဘများ နားလည်ခဲ့ကြသည်မှာ “သခင်ယေရှုသည်သာလျှင် မျှော်လင့်ရာ” ဖြစ်ကြောင်း သိရှိနားလည်လာကြပါသည်။ မည်မျှပင် အခြေအနေဆိုးကာ နောက်ဆုံး အခြေအနေ ဖြစ်နေပါစေ ဘုရားသခင်က သင့်ကို ပြန်လည် တည့်မတ်စေကာ အောင်မြင်မှုများဖြင့် ဖြည့်ဆည်း ပေးမည် ဆိုသည်ကို ဘယ်သော အခါမျှ မမေ့စေချင်ပါ။
ဒုတိယတစ်ယောက်မှာ သေပြီးနောက် ထမ်းစင်ဖြင့် ထမ်းကာ သုဿာန်သို့ ပို့ဆောင်နေသည့် အချိန်ဖြစ်သည်။ မည်သည့် မျှော်လင့်ချက်မှ မရှိနိုင်သော အခြေအနေဖြစ်သည်။ မျှော်လင့်ချက် ကုန်ဆုံးနေသောကြောင့် ထိုအလောင်း ကြီးကို မြေသို့ မြုတ်နှံရန် ပြင်ဆင်လုပ်ဆောင်နေခြင်းဖြစ်သည်။ သို့သော် သခင်ယေရှုနှင့် တွေ့သော အချိန်တွင် ပြန်လည် ထမြောက်လာလေတော့သည်။
နောက်ဆုံးတစ်ယောက်မှာ လာဇရုဖြစ်သည်။ သေပြီးသည်သာမက အုပ်ဂူတွင် မြုတ်နှံပြီးသည့်အခြေအနေ ဖြစ်သည်။ မည်သို့မျှ မျှော်လင့်ခြင်းမရှိပါ။ သေပြီး ပုပ်နေသော အခြေအနေဖြစ်သည်။ သို့သော် ယေရှုက အော်ဟစ်ကာ ခေါ်ယူ လိုက်သောအခါ အပုပ်နံ့ ကင်းစင်မှုများဖြင့် ပြန်လည် ထမြောက်လာ ပါတော့သည်။ အုပ်ဂူထဲမှ ထွက်လာပါတော့သည်။
လူ့အခြေအနေအရ ထိုအခြေအနေသည် မည်သို့မျှ အောင်မြင် အဆင်ပြေရန် မဖြစ်နိုင်။ သို့သော် ဘုရားသခင်သည် ရှင်ပြန် ထမြောက်ခြင်း တန်ခိုးတော်ဖြင့် လူတို့၏ လက်ရှိ အခြေအနေ အသီးသီးကို မှောက်လှန်ဖျက်ဆီးကာ လူတို့ မမျှော်လင့်နိုင်သည့် အခြေအနေကို ဖန်းတီးပေးတော်မူခဲ့သည်။ ဘုရားသခင်သည် သင်ဘာမျှ မလုပ်ဆောင် နိုင်သော အခြေအနေ မှာပင် ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း တန်ခိုးတော်နှင့် ပြည့်ဝသောကြောင့် သေနေသော သင့်၏ မျှော်လင့်ခြင်းအခြေအနေကို ပြန်လည် ရှင်သန်ကြီးထွားစေနိုင်သည် ဆိုသည်ကို မမေ့ပါနှင့်။
သင့် အသက်တာထဲမှ ခက်ခဲ အားနည်းနေသော အခြေအနေ အသီးသီး အတွက် မျှော်လင့်ချက်များဖြင့် အသက်ရှင် နိုင်ရန် ယခုကဲ့သို့ ဝေငှလိုက်ပါသည်။ (၁) အသက်ရှင်သော မျှော်လင့်ခြင်း ရှိပါစေ၊ (၂) သင်၏ မျှော်လင့်ခြင်းသည် ဘယ်သောအခါမျှ သေမသွားပါစေနှင့်၊ (၃) သေနေသော မျှော်လင့်ချက်များ ရှိနေသည့် တိုင်အောင် ဘုရားသခင်က ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်း တန်ခိုးတော်နှင့် ပြည့်ဝသော ဘုရားဖြစ်သည်ကို အသက်တာတွင် စွဲမြဲစွာ မှတ်သားထား စေချင်ပါသည်။ ဘုရားသခင် ကောင်းကြီးပေးပါစေ။ (အာမင်)